Tag: plugin chrome google
Scratchpad Command: Ny fomba haingana indrindra ahafahana miditra sy manavao ny Salesforce amin'ny fampiharana Internet rehetra
Zoma, Aprily 2, 2021 Alakamisy, Jolay 22, 2021 Douglas Karr
Ireo mpitantana kaonty saika amin'ireo orinasam-pivarotana rehetra dia tototry ny fitaovana fivarotana be loatra izay nozera-maso tamin'ny CRM. Izany dia manery ny mpivarotra hidina amin'ny làlan-kiasa mandreraka sy mandreraka amin'ny fitetezana ireo mandroso sy miverina eo anelanelan'ny fitaovana, fitantanana tabilao fitetezana am-polony, fanindriana tsy misy fotony, ary fanaovana kopia sy fametahana mandreraka, mandritra izany fotoana izany dia manandrana manavao ny Salesforce. Vokatr'izany dia mihena ny fahombiazan'ny isan'andro, mamokatra, ary farany, fotoana anaovan'ny mpivarotra ny asany - mivarotra. Didy Scratchpad
Amin'izao vanim-potoana dizitaly izao, niady tamin'ny Internet ny ady ho an'ny habaka marketing. Miaraka amin'ny olona marobe an-tserasera, ny famandrihana sy ny varotra dia nifindra avy amin'ny toerany nentim-paharazana ka hatrany amin'ireo vaovao nomerika. Ny tranokala dia tokony ho eo amin'ny lalao tsara indrindra azony ary jerena ny volavolan-tranonkala sy ny traikefan'ny mpampiasa. Vokatr'izany dia lasa manakiana ny fidiram-bolan'ny orinasa ny tranonkala. Raha jerena ity scenario ity dia mora ny mahita ny fomba nahatonga ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po na CRO araka ny fantatra